अमेरिका बिरुद्ध भड्कियो चीन, इजरायल-प्यालेस्टिनीको द्वन्द्वमा आउला नयाँ मोड ? - Aarthiknews
एजेन्सी। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्वका बिषयमा चीनले फेरि अमेरिका प्रति कडा टिप्पणी गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्री वांग यीले आइतबार भने कि उनी यस कुरामा अत्यन्त दु:खी छन् कि अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यस हिंसाको बिरूद्ध खुला रुपमा बोल्न दिएन ।
वांगले भर्चुअल सत्रमा भने, "दुःखको कुरा यो छ कि एउटा देश (अमेरिका) को कारण सुरक्षा परिषद एक आवाजमा बोल्न सक्षम छैन।" हामी अमेरिकालाई उनीहरूको जिम्मेवारी वहन गर्न अपील गर्दछौं।
चीनले भनेको छ कि गाजामा रक्तपात रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अझ बढी प्रयास आवश्यक छ।
अमेरिकाले के गर्‍यो?
वास्तवमा इजरायलको सहयोगी अमेरिकाले गत हप्ता इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको बारेमा हुने बैठक स्थगित गर्यो र यसबारे कुनै छलफल गर्न कुनै उत्साह देखाएन।
यसबीच वाइडेन प्रशासनले भनेको छ कि उसले गाजामा भइरहेको हिंसा रोक्न 'पर्दा पछाडि' काम गरिरहेको छ। यस मुद्दाले सुरक्षा परिषद्को आधिकारिक छलफलमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।
यति मात्र होइन, अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनले यो समेत भनेका थिए कि हमासको आक्रमणको प्रतिक्रियामा इजरायललाई आत्मरक्षाको अधिकार छ। अर्कोतर्फ प्यालेस्टाइन्स समर्थक देशहरू भन्छन् कि आत्मरक्षाको अर्थ निर्दोष प्यालेस्टिनी नागरिकहरूमाथि आक्रमण गर्नु होइन।
सुरक्षा परिषदले के भन्यो?
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले चेतावनी दिएका छन् कि द्वन्द्व रोक्न नसकेमा सम्पूर्ण क्षेत्र नै "अनियन्त्रित संकट" मा डुब्ने छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले बैठकको सुरूवातमा भनेका थिए, "गाजामा हिंसा एकदम भयावह छ र यो द्वन्द्व तुरुन्त रोकिनु पर्छ।"
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पनि गाजामा युद्धविराम (युद्धविराम) कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थहरुसँग बैठक गर्यो। यद्यपि यस बैठकमा कुनै ठोस निष्कर्ष हुन सकेन।
चीन अमेरिकासँग किन रिसायो?
यसभन्दा अघि पनि इजरायल-प्यालेस्टाइन मुद्दालाई लिएर चीनले अमेरिकालाई लक्षित गरेको थियो। चीनले व्यंग्यात्मक रूपमा भन्यो, "अमेरिकाले आफूलाई मानव अधिकारको रक्षाकर्ता र 'मुसलमानको हितचिन्तक' भन्दै इजरायलसँगको झगडामा मारिएका प्यालेस्टाइन (मुसलमान) लाई पछाडि फर्कायो।"
चीनले भनेको थियो, "अमेरिकाले केवल शिनजियांग (चीन) को वेगर मुस्लिमहरूको ख्याल राख्छ। उ प्यालेस्टाइनका मुसलमानहरुको बारेमा मौन छ। प्यालेस्तिनीहरुलाई कसरी युद्ध र विपद्को स्थितिमा धकेलीएको छ अमेरिकाले देख्न सक्दैन। "
चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका दुबै भिटो अधिकारका साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुन्। त्यसैले चीनको कडा प्रतिकृया पछी अब अमेरिकाले इजराइललाई उक्साउन बन्द गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।